हामी के चाहन्छौं- समाधान वा... :: अमित ढकाल :: Setopati
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला एउटा पदावली खुब चल्तीमा थियो- अर्जुन दृष्टि।
उनी भन्थे- पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नेमा मेरो 'अर्जुन दृष्टि' छ।
जब छिनोफानो गर्ने समय आयो, उनको दृष्टि संविधानबाट सत्तामा सर्यो। संविधानसभा विघटन गरे।
सायद उनले ठानेका थिए- संविधानसभा बिघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री हटाउने वा बनाउने कुनै संस्था नै हुन्न। आफू निष्कंटक प्रधानमन्त्री बन्छु। लामो सत्ताको छोटो सपनाबाट उनी चाँडै ब्युँझिए। एक वर्ष नपुग्दै उनको सत्ता गयो।
त्यो बेला जसरी पनि संविधान लेख्नुपर्नेमा आफू चुकेको भन्दै भट्टराईले सार्वजनिक रुपमै आत्मालोचना गरेका छन्। भट्टराईको नेतृत्वमा संविधान लेखिएको भए राजनीतिमा आज उनी र माओवादी पार्टीको पनि स्थान अलग ठाँउमा हुन्थ्यो।
अर्थतन्त्र राजनीति जस्तै हो। आएको अवसर सदुपयोग गर्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ। अवसर गुम्यो भने माओवादी पार्टी जस्तै कहाँबाट कहाँ पुगिन्छ।
अर्थतन्त्र कोल्टे फेराउन पनि हामीलाई 'अर्जुन दृष्टि' चाहिन्छ। 'फोकस्ड माइन्ड'ले गर्न नसक्ने केही छैन। बाह्रतिर भौंतारिने दिमागले केही पार लगाउन सक्दैन।
हामीलाई केही कुरामा 'फोकस' हुन निकै सकस हुन्छ। हाम्रो सरकार पनि त्यस्तै छ। हुने नै भयो।
आज धुमधामसँग प्रचार गर्छ- यो काम गर्छु, उसो गर्छु। केही समयपछि सेलाउँछ। अँगेनोको आगो सेलाएपछि आलु कसरी पाक्थ्यो! अधकल्चै हुन्छ।
हाम्रा धेरै बाचा, धेरै योजना अधकल्चै रहुनुको प्रमुख कारण त्यही हो।
माओवादीले २०६४ सालको निर्वाचन घोषणापत्र लेख्दा भन्यो- दस वर्षभित्रमा दस हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने।
पहिलो संविधानसभापछि माओवादीकै सरकार बन्यो। घोषणापत्रका मस्यौदाकार भट्टराई आफैं अर्थमन्त्री बने। सुरूमा दस हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने खुब भाषण गरे। सर्पजस्तो घिस्रिने होइन, भ्यागुतोजस्तो उफ्रिने आर्थिक बृद्धिदरको कुरा गरे।
बिस्तारै माओवादी अँगेनोको आगो सेलायो, आलु पाकेन!
कुरा माओवादीको मात्र होइन। आज बुरुक्क उफ्रिने र भोलि थचक्कै बस्ने हाम्रा बहुसंख्यक राजनीतिज्ञको चरित्र हो।
जलविद्युत विकास गर्ने, बिजुली उत्पादन गर्ने आजका नारा होइनन्। हरेक पार्टीका घोषणापत्रमा हरेक वर्ष यी नारा छन्। सरकारमा सबै पार्टी पुगेकै छन्।
हाम्रो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता बल्ल एक हजार मेगावाट नाघेको छ। बाचा गरेको दस हजार मेगावाट, उत्पादन गरेको हजार मेगावट!
यो उत्पादनले हामीलाई पुगेको छैन। आन्तरिक माग बढेको बढ्यै छ। बाह्य बजार पनि छ।
उत्पादन गर्न सके, देशभित्र र बाहिर पनि सुनिश्चित बजार भएको एक मात्र नेपाली उत्पादन हो बिजुली। आजका दिनमा हामीसँग प्रशस्त बिजुली हुने हो भने ठूलो मात्रमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात घटाउन सक्छौं। उब्रिएको बिजुली निर्यात गर्न सक्छौं। व्यापार घाटा कम गर्न सक्छौं।
यो श्रृंखलाको भाग-१ मा मैले व्यापार घाटाले हाम्रो अर्थतन्त्रमा बालेको रातो बत्तीबारे चर्चा गरेँ। भाग-२ मा कसरी बिजुलीलाई केन्द्रमा राखेर हाम्रो अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना गर्न सकिन्छ भन्ने चर्चा गरेँ।
डुबाउँछ कि क्या हो हामीलाई व्यापार घाटाले! (भाग-१)
अर्थतन्त्र केले उकास्ने? (भाग-२)
अन्तिम भागमा लेखेको छु- बिजुली विकासका हाम्रा मुख्य चुनौती के छन्, के गर्नुपर्छ?
सबभन्दा ठूलो समस्या नै 'अर्जुन दृष्टि'को अभाव हो। केहीमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने हो भने हामी केही पनि गर्न सक्ने छैनौं।
सरकारले कति चाँडो आफ्नो काम र बाचा भुल्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो, ऊर्जा संकटकाल।
तीन वर्षअघि केपी ओली नेतृत्वकै पहिलो सरकारले ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेको थियो। संकटकाल घोषणा गरेर सरकारले भन्यो- जलविद्युत उत्पादन द्रूतगतिमा अघि बढाउने, मुलुकमा सोलार र वायु ऊर्जा पनि चाँडोभन्दा चाँडो विकास गरेर ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने। बिजुली उत्पादन र विस्तारमा देखिएका अवरोध हटाउने। तत्काल लोडसेडिङ अन्त्य गर्न भारतबाट बिजुली आपूर्ति गर्ने।
भारतबाट बिजुली आपूर्ति गर्ने काम द्रुतगतिमै भयो। आयातित बिजुली र आन्तरिक व्यवस्थापन चुस्त पारेर कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य गरे। त्यसपछि हामीले ऊर्जा संकट बिर्सियौं।
ट्रान्समिसन लाइन सुधार र विस्तार नगरी, बिजुली उत्पादन भए पनि उपभोक्ताकहाँ पुर्याउन सकिन्न। बिजुलीलाई गाडी मान्ने हो भने ट्रान्समिसन लाइन सडक हो। सडक नभई बिजुली एक ठाँउबाट अर्को ठाउँ पुर्याउन सकिन्न।
तर अहिले ट्रान्समिसन लाइन विस्तारमा जताततै अवरोध छ। सत्तारुढ दलकै नेता, कार्यकर्ता पनि अवरोधमा उत्रिएका छन्। अहिले घाँटी लागेका ठाँउमा पनि ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा अवरोध छ।
विराटनगर त्यस्तै एउटा उदाहरण हो।
विराटनगरको विद्युत माग पुरानो ट्रान्समिसन लाइनले धान्न नसक्ने भइसक्यो। दुहवी-कटहरी ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गरेर आपूर्ति सहज बनाउन प्राधिकरणले प्रयत्न गरिरहेको छ। २० किलोमिटर लामो यो लाइनको १७ किलोमिटर जति निर्माण सकिसक्यो। बाँकी तीन किलोमिटरमा पनि प्राधिकरणले खम्बा गाडिसकेको छ।
ट्रान्समिसन लाइन सडक छेउछेवै जाने हो। विरोध गर्नुपर्ने कारणै छैन। तर स्थानीय विरोधमा उत्रेकाले खम्बामा तार राख्ने काम रोकिएको छ।
विरोध गर्नेमा नेकपाका स्थानीय कार्यकर्ता नै अगाडि छन्। सो क्षेत्रबाट निर्वाचित नेकपा सांसद अमनलाल मोदीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको बैठकमै स्थानीयलाई मनाउन पाँच लाख दिनुपर्ने तर्क गरे!
प्राधिकरणले पैसा दिन मानेन, काम रोकियो।
विराटनगरका उद्योगी भने दैनिक रुपमा समस्यामा छन्।
'भोल्टेज कम छ, बिजुली झ्याप्प‍-झ्याप्प जान्छ। उद्योगी ठूलो मारमा छन्,' विराटनगर उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भीम घिमिरेले भने, 'एकातिर उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्। अर्कातिर छिन्-छिनमा जाने बिजुलीले मेसिनको टुटफुट बढेको छ।'
अहिले विराटनगरमा उद्योगका लागि अघोषित लोडसेडिङ नै रहेको उनले गुनासो गरे।
'कहिलेकाँही ५-६ घण्टासम्म बत्ती जान्छ,' उनले भने।
उत्पादित बिजुली भए पनि ट्रान्समिसन लाइन अभावमा आपूर्ति ठीक गर्न नसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
'अर्को गर्मी याममा पनि लाइन निर्माण पूरा भएन भने त्यो बेला विराटनगरमा चर्को लोडसेडिङ हुन्छ,' ट्रान्समिसन लाइन निर्माण हेरिरहेका प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने।
त्यस्तै समस्या राजधानीमै पनि छ।
ललितपुरमा बढ्दो बिजुली माग आपूर्ति गर्न अब लगनखेलको पुरानो सव-स्टेसनले धान्न नसक्ने भइसक्यो। हरिसिद्दीमा सव-स्टेसन बनाउन प्राधिकरणले जग्गा किनेको छ। स्थानीयकै अवरोधका कारण बनाउन सकेको छैन। ट्रान्समिसन लाइन विस्तार पनि रोकिएको छ। लाइन विस्तार गर्न नसके अर्को वर्ष गर्मीमा पाटनमा पनि लोडसेडिङ हुनेछ।
जग्गा क्षतिपूर्ति विवादमा केही समयअघि स्थानीयले प्राधिकरणको टावर नै ढालिदिएका छन्। स्थानीयको यो अवरोधमा नेकपा सांसद, कार्यकर्ताकै साथ छ।
प्राधिकरणले देशभरिनै ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्दैछ। सरकारले अर्बौं रुपैयाँ छुट्टयाएको छ। एसियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडिबि)को अर्बकै सहयोग छ।
तर जताततै स्थानीयको अवरोध छ।
'नेकपाले जितेका ठाँउमा कांग्रेस कार्यकर्ताको अवरोध, कांग्रेसले जितेकामा नेकपाको,' प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, 'आफ्नै पार्टीभित्र पनि विरोध र अवरोध छ।'
स्थानीय सरकार आएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)ले पनि कडिकडाउ गरेर अवरोध हटाउन पहल गर्न छाडेको उनले बताए।
निजी क्षेत्र पनि स्थानीय नेतृत्वबाट कम पीडित छैन।
एक निजी बिजुली उत्पादक व्यवसायीले भने, 'साइटमा हाम्रो परियोजनाको काम रोकिएको छ। अघि बढाउन गाँउपालिका प्रमुखले दुई करोड खर्च गरेर गाँउको एउटा बाटो बनाइदिनुपर्ने शर्त राखेका छन्।'
ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेको मुलुकको हाल यस्तो हुन्छ? बार्दलीमा निस्केर संकटकाल घोषणा गर्ने अनि कोठाभित्र सिरानी हालेर सुत्ने?
यसरी ऊर्जा संकट पार लाग्दैन। बिजुली विकास पनि सम्भव छैन।
त्यसैले सबभन्दा पहिले हामीले दृष्टिकोण बदल्नुपर्यो। बिजुली विकासका लागि काम गर्ने हो कि होइन, तय गर्नुपर्यो।
आवश्यक छ भने, आजका दिनमा बिजुली तुलनात्मक लाभको सबभन्दा बलियो क्षेत्र हो-होइन भन्ने बहस गरौं। बिजुलीबाहेक अरू क्षेत्रले आयात व्यापक घटाउन सघाउँछ, निर्यातमार्फत् विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षमता राख्छ र अर्थतन्त्र पार लगाउने सामर्थ्य राख्छ भने, त्यो पनि छलफल गरौं। निष्कर्षमा पुगौं। त्यसपछि भने काम गरौं।
यो श्रृंखलाको भाग-२ पढेपछि एकजना मित्रले भने- बिजुलीको लाभ उपयोग गर्ने अवसर हामीले गुमाइसक्यौं। अब केही वर्षमा हिमालमा हिउँ नै अडिन्न। खेल खत्तम।
अरू धेरै मित्र र पाठकले सोलार बिजुली 'स्टोर' गर्ने ब्याट्रीमा भइरहेको तीव्र प्रगतिमा पनि ध्यान दिन सुझाएका छन्। सोलार ब्याट्रीमा भइरहेको चामत्कारिक प्रगतिसँगै पानीबाट हामीले निकाल्ने बिजुलीको तुलनात्मक लाभ सकिन लागेकोमा उनीहरूको चिन्ता छ।
यी दुवै तर्कलाई हेरौं।
हिमालमा हिउँ कहिलेदेखि अडिन छोड्ला? कसैलाई यकिन छैन। चाँडै सकिन्छ भन्ने अध्ययनले पनि ७०-८० वर्ष रहन्छ भन्छन्। त्यसो भए, हामीले पानीबाट बिजुली झनै चाँडो विकास गर्नुपर्यो, हैन र?
पाँचदेखि दस वर्षमा बन्ने मझौला र ठूला आयोजनाले पनि हामीलाई अर्को ६०-७० वर्षमा ठूलो प्रतिफल दिनेछन्।
हामी अहिलेको चिन्ता गरौं, वातावरण भरसक नबिगारौं, ७०-८० वर्षपछिको समस्या झेल्ने सामर्थ्य र विवेक लिएर अर्को पुस्ता आउनेछ भन्ने विश्वास गरौं।
जहाँसम्म सोलारको बिजुली सञ्चय गरेर राख्ने 'स्टोरेज ब्याट्री'को कुरा छ, त्यो विकास चाख लाग्दो छ। संसारको ध्यान अहिले त्यसैमा छ। संसारले स्टोरेज ब्याट्रीको अध्ययन-अनुसन्धानमा ठूलो पैसा लगाएको छ। नयाँ-नयाँ प्रयोग भइरहेका छन्। नयाँ-नयाँ परिणाम आइरहेका छन्।
दुई साताअघि मात्र एलन मस्कको टेस्ला कम्पनीले तीन मेगावाट प्रतिघण्टा बराबरको बिजुली सञ्चय गर्नसक्ने 'मेगाप्याक' ब्याट्री बनाएको घोषणा गरेको छ। यस्ता धेरै ब्याट्री एकै ठाँउमा राखेर सौर्य र वायुबाट उत्पादित हजारौं मेगावाट बराबर ऊर्जा सञ्चित गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ।
यस्ता ब्याट्री लामो समयसम्म बिजुली सञ्चित गर्न कति प्रभावकारी हुन्छन्? यसरी सञ्चित गरेको बिजुली कति महँगो हुन्छ? यो सबै थाहा पाउन हामीले अझै केही समय कुर्नैपर्छ।
सञ्चित बिजुली धेरै सस्तो भने हुने छैन।
केही महिनाअघि भारतको 'द इनर्जी एण्ड रिसर्च इन्सिच्युट' र अमेरिकाको 'क्लाइमेट पोलिसी इनिसिएटिभ'ले संयुक्त रूपमा एउटा अध्ययन गरेका थिए। उक्त अध्ययनले स्टोरेज ब्याट्रीको मूल्य आउने वर्षहरूमा धेरै घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ। तर पनि त्यो महँगो नै हुनेछ।
यस्ता ब्याट्रीमा सञ्चित बिजुली प्रतियुनिट कतिमा बेच्न सक्यो भने उत्पादक कम्पनी 'ब्रेक-इभन'मा पुग्छन् भनेर पनि अध्ययन गरिएको छ। अध्ययनअनुसार भारतमा अहिले त्यस्तो मूल्य प्रतियुनिट २९ भारू छ। सन् २०३० सम्ममा घटेर ११.९० भारू पर्नेछ। र पनि, पानीबाट उत्पादित बिजुलीभन्दा धेरै महँगो हुनेछ।
अहिले यस्ता ब्याट्रीको अध्ययन-अनुसन्धानमा जुन मात्रामा खर्च भइरहेको छ, त्यो हेर्ने हो भने मूल्य अझै घट्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
हाम्रा लागि भने महत्वपूर्ण 'फ्याक्टर' मूल्य मात्र होइन।
त्योभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो- आगामी २०-४० वर्षमा नेपाल र भारतमा सोलार र वायु ऊर्जाबाट कति बिजुली निस्किन्छ? त्यसले ऊर्जाको माग कति पूरा गर्न सक्छ?
भारतले सन् २०४० सम्ममा आफ्नो ऊर्जा उत्पादनको ४० प्रतिशत 'क्लिन इनर्जी' पुर्याउने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। अर्थात् अबको २० वर्षमा पनि भारतमा ६० प्रतिशत ऊर्जा प्रदुषणकारी श्रोत, मुख्यतः कोइलाबाटै उत्पादन हुनेछ।
नेपालमा त सोलारबाट बिजुली उत्पादनको चुनौती झनै धेरै छ। ठूलो मात्रामा सौर्य ऊर्जा उत्पादनका निम्ति 'प्यानल' राख्न धेरै जग्गा चाहिन्छ। हामीसँग त्यस्तो ठाँउ छैन।
भारतले मरभूमी प्रयोग गरिरहेको छ। सबै आन्तरिक माग पूरा हुने गरी सोलार र वायुबाट बिजुली उत्पादन गर्न त भारतसँग पनि पर्याप्त जमिन छैन।
त्यसैले आउने धेरै दशकसम्म हाम्रो आन्तरिक बजार र भारतमा पनि पानीबाट उत्पादित बिजुलीको माग रहिरहनेछ। भारतमा कोइलाबाट उत्पादित बिजुली जत्तिकै वा त्योभन्दा सस्तोमा हामीले पानीबाट बिजुली निकाल्नेबित्तिकै हाम्रो तुलनात्मक लाभ स्थापित भइहाल्छ। बजार सुनिश्चित हुन्छ।
सुनिश्चित गर्नुपर्ने हाम्रो आन्तरिक उत्पादन मात्र हो।
त्यसका लागि हामीलाई 'अर्जुन दृष्टि' चाहियो।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राज्यको एउटा संयन्त्र नै चाहियो, जसले बिजुली विकासका सारा विषय हेरोस्। बदलिँदो प्रविधि हेरोस्, बजार हेरोस्, गर्नुपर्ने कामको सूची बनाओस्, अन्तर मन्त्रालय समन्वय चुस्त बनाओस्, तत्कालका समस्या समाधान खोजोस्, द‍ीर्घकालीन दृष्टि राखोस्।
त्यो संयन्त्रको दिमागमा बिजुलीको मिटर झैं बिजुली विकासका कुरा फनन घुमिरहून्। तब पो काम अघि बढ्छ।
हामीले आउने दस वर्षमा आन्तरिक खपत बढाउँछौ, व्यापार घाटा कम गर्ने उद्धेश्यले केही हजार मेगावाट बिजुली निकासी पनि गर्छौं भन्ने हो भने उत्पादन व्यापक बढाउनुपर्छ।
आउने पाँच वर्षमा तीन-चार हजार मेगावाटसम्म उत्पादन हुने क्रममा छ। हामीलाई यतिले पुग्दैन। अर्को दश वर्षसम्म १०-१५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने उद्धेश्य राख्ने हो भने हाम्रो सबभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ- पुँजी।
'पुँजी सबभन्दा ठूलो चुनौती हो,' सानिमा मध्य तमोरका सिइओ जुगल भुर्तेल भन्छन्, 'हाम्रा बैंकहरूसँग ठूला परियोजनाका लागि लगानी गर्न सक्ने क्षमतै छैन।'
बैंकहरू त्यसै पनि निरन्तर तरलता अभावमा छन्। स-सानादेखि ठूला उद्योगीसम्मले ऋण पाउन कठिन हुन थालेको छ।
एनएमबी बैंकका सिइओ सुनिल केसी पनि विद्युत विकासमा ठूलो लगानी गर्ने क्षमता नेपाली बैंकहरूको नभएको स्वीकार्छन्।
'हाम्रो बैकिङ क्षेत्रको आन्तरिक श्रोतले धान्दैन। बिजुली उत्पादनमा ठूलो फड्को मार्न बाह्य लगानी आकर्षित गर्नैपर्छ,' उनले भने।
हामीलाई आउने दस वर्षमा १० देखि १५ अर्ब डलर लगानी बिजुली विकासका लागि चाहिन्छ। अर्थात् प्रत्येक वर्ष एक अर्ब डलर बराबर लगानी चाहिन्छ।
यो लगानी कसरी जुटाउने? सरकारको सबभन्दा ठूलो जिम्मेवारी यही हो।
आफ्नै श्रोतबाट सरकारले कति लगानी गर्न सक्छ? विदेशी पुँजी कति परिचालन गर्न सक्छ? ऊर्जा क्षेत्रमा कति विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्छ? लगानी गर्ने बैंक वा निजी क्षेत्रका विद्युत उत्पादकलाई जलविद्युतमा लगानीयोग्य पुँजीमा पहुँच बनाइदिन के गर्न सक्छ?
यी महत्वपूर्ण प्रश्न हुन्। नखोजी र प्रयत्न नगरी जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक पुँजी जोहो हुँदैन।
सरकारले पनि त्यस्तो पुँजी जोहो गर्न प्रयत्न गर्नैपर्छ।
भारतमा मुम्बई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन बनाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जापानलाई कसरी मनाए भन्ने उदाहरण हाम्रा लागि प्रेरक बन्न सक्छ।
भारतमा बुलेट ट्रेन सञ्जाल विस्तार गर्ने मोदीको ठूलो सपना हो। तर त्यसमा एउटा ठूलो चुनौती छ- बुलेट ट्रेन महँगो प्रविधि हो। यो बनाउन धेरै पुँजी खर्च हुन्छ, रेलको भाडा महँगो पर्छ। औसत भारतीयले भाडा तिर्नै सक्दैनन्। त्यसैले मोदीको ठूलो टाउको दुखाइ सस्तो पुँजी कसरी खोज्ने भन्ने हो।
मोदीले ५०८ किलोमिटर लामो बुलेट ट्रेनका लागि जापान सरकारलाई गुहारेर समाधान खोजेका छन्। करिब १७ अर्ब डलर लाग्ने अनुमान गरिएको यसको निर्माणका लागि मोदीले उनका जापानी समकक्षी सिन्जो आवेलाई सस्तोमा ऋण दिन मनाएका छन्।
यसका लागि जापानले भारतलाई ५० वर्षमा तिर्नेगरी ०.१ (सुन्ना दशमलव एक) प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन सहमति जनाएको छ। र, त्यो ऋण सुरूको १५ वर्षसम्म तिर्नुपर्दैन!
५०८ किलोमिटर दुरी पार गर्ने रेलको भाडा प्रतिव्यक्ति पाँच हजार नेपाली रूपैयाँ राख्दा पनि ऋण तिर्न भारतलाई हम्मे पर्नेछ। त्यसैले यति सस्तो ऋण दिन मोदीले जापानलाई सहमत गराएका हुन्।
जापान हाम्रो पनि मित्रराष्ट्र हो। नेपालप्रति जापानको ठूलो सदभाव रहिआएको छ। बिजुली विकासका लागि हामीले आन्तरिक र बाह्य बजार सुनिश्चितता देखाएर जापानसँग ऋणको कुरा गर्न सक्छौं।
हामी भारत हैनौं। उसको जतिकै रणनीतिक महत्व जापानलाई नेपालको नहोला। ०.१ प्रतिशत ब्याजदरमा उसले ऋण दिन नसक्ला, सुरूका १५ वर्ष ऋण तिर्नुपर्दैन भन्न उसलाई गाह्रो होला।
तर ऊर्जा विकासका लागि जापानले हामीलाई सहुलियत ऋण दिन सक्छ। त्यो ऋण नेपाली बजारको भन्दा पक्कै धेरै सस्तो हुनेछ।
जापानसँग नेपाललाई जलविद्युत क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग गरेको इतिहास पनि छ। नेपालका महत्वपूर्ण जलाशययुक्त आयोजना कुलेखानी-१ र २ जापानकै सहयोगमा बनेका हुन्। लामो समयसम्म हिउँदमा हामीलाई अँध्यारोबाट जोगाउन कुलेखानीले ठूलो भूमिका खेल्यो।
हामी जापानलाई इतिहासको त्यो महत्वपूर्ण पाटोको स्मरण गराउन सक्छौं। जलविद्युत क्षेत्र विकासको यो महत्वपूर्ण घडीमा 'फेरि एकपटक तिम्रो सहयोग चाहियो' भन्न सक्छौं।
हामीले धेरैजसो जापानसँग अनुदान सहयोग माग्दै आएका छौं। जलविद्युत जस्तो उत्पादनमूलक र बजार सुनिश्चित भएको क्षेत्रमा सहयोग गर्न जापान सरकार उत्सुक हुने सम्भावना धेरै छ।
चीनसँग पनि कुरा गर्न सक्छौं। अनौपचारिक छलफलमा चिनियाँहरूले भनिरहेका छन्- हाम्रो लगानी उठ्ने, नेपाललाई पनि फाइदा हुने परियोजना छ भने लगानी गर्न तयार छौं।
हामीले बिआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ)मा सही गरिसकेका छौं। बिआरआई भनेकै व्यापारिक परियोजना हो। यसअन्तर्गत अनुदान हुन्न। ऋण र लगानी हुन्छ।
निजी क्षेत्रका विद्युत उत्पादक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान दुइटा चिनियाँ सरकारी कम्पनीसँग मिलेर कालिगण्डकीमा १६४ मेगावाटको ४० अर्ब रूपैयाँ पर्ने परियोजना अघि बढाउँदैछन्। सो परियोजनाका लागि बिआरआईको पैसा लिने प्रयत्न भइरहेको उनले बताए।
'यसमा बिआरआईको पैसा राख्ने कुरा भइरहेको छ। म आशावादी छु, कुरा मिल्छ होला,' उनले भने।
बिआरआईको पैसा बिजुली विकासमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ? त्यसमा हामी चीनसँग कुरा गर्न सक्छौं।
भारत पनि अर्को सम्भावना हो।
चीन र भारतबाट बिजुली विकासका लागि पुँजी परिचालन गर्न सकिन्छ। यी दुई मुलुकबाट 'सफ्ट लोन' नै ल्याएर पनि त्यसको सदुपयोग बिजुली उत्पादनमा गर्यौं भने हामीलाई फाइदै हुन्छ।
बाणिज्य बैंकहरूले पनि बिजुली उत्पादनका लागि भनेर विदेशबाट स-साना लगानी ल्याउन थालेका छन्।
एनएमबी बैंक यस्तो लगानी ल्याउने पहिलो बैंक हो। उसले विश्व बैंकको 'इन्टरनेशनल फाइन्यान्स कर्पोरेशन' र बेलायतको 'कमनह्वेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन'बाट जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न साढे तीन अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी ल्याइसकेको छ। दुई संस्थाले चार अर्बभन्दा बढी ऋण स्वीकृत गरेका छन्।
'क्लिन इनर्जी अहिले संसारभर प्राथमिकतामा छ। हामीले हाम्रो प्राथमिकता तय गर्यौं, उनीहरूलाई बुझाउन सक्यौं, नीतिनियम चुस्त पार्न सक्यौं, कानुनमा आवश्यक सुधार गर्न सक्यौं भने बिजुली विकासका लागि विदेशी पुँजी भित्र्याउन सकिने सम्भावना छ,' एनएमबीका सिइओ केसीले भने।
तर सरकारी निकायले त्यस्तो सम्भावना खोज्ने काम गरेकै छैन।
बिजुली उत्पादनमा लगानी गर्न भनेर २०६८ सालमै सरकारले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) स्थापना गरेको थियो। उक्त कम्पनी स्थापनाको वर्ष हाम्रा लागि कम महत्वको थिएन। काठमाडौंको फर्पिङमा बिजुली उत्पादन हुन सुरू भएको सय वर्षको अवसर पारेर कम्पनी स्थापना भएको थियो। जलविद्युत विकासमा पुँजी अभाव हुन नदिने उक्त कम्पनीको उद्धेश्य थियो।
उद्धेश्य भएर मात्र के गर्नु? अँगेनोको आगो फेरि पनि सेलायो। फेरि पनि हामी कार्यान्वयनमा चुक्यौं। यो कम्पनीले गति नै लिन सकेन।
स्थापनाको आठ वर्षमा यो कम्पनीले जम्मा ४ अर्ब रूपैयाँ लगानी गरेको छ। थप २१ अर्ब लगानी गर्न प्रतिबद्धता जनाइसकेको कम्पनीका सिइओ छविराज पोखरेलले बताए।
उक्त कम्पनीको एउटा मुख्य उद्धेश्य जलविद्युतमा लगानी गर्न विदेशबाट 'सफ्ट लोन' ल्याउने पनि हो। कम्पनीले अहिलेसम्म विश्व बैंकबाट चार अर्ब रुपैयाँ ल्याएको छ भने सार्क डेभलपमेन्ट फन्डबाट डेढ अर्ब रूपैयाँ ल्याउने प्रतिबद्धता पाएको छ।
यो कम्पनीले लगानी गरेको र जोहो गरेको रकम 'हात्तीको मुखमा जिरा' बराबर हो। हामी दस हजार मेगावाटको कुरा गरिरहेका छौं, यो कम्पनीसँग सय मेगावाट बराबरको परियोजनामा लगानी गर्ने पुँजी पनि छैन।
त्यसैले त भनेको, कुनै पनि कुरामा हाम्रो 'अर्जुन दृष्टि' छैन।
आठ वर्षअघि यो कम्पनी त्यति धुमधामसँग खोलिएको थियो। जलविद्युत विकासका लागि यसले पुँजी जुटाउने र लगानी अभाव हुन नदिने गुड्डी हाँकिएको थियो। व्यवहारमा भने, यो थप एउटा बैंक जस्तो मात्र भयो। त्यो पनि पर्याप्त पुँजी नभएको सानो बैंक जस्तो।
किनभने, जुन उद्धेश्यले खोलिएको थियो त्यसअनुसार प्रयत्नै भएन। आवश्यक आधारै तयार पारिएन।
अब यो कम्पनीलाई हामीले सुरूमा देखेको सपनाअनुसार बनाउने बेला भएको छ।
'सरकारले ग्यारेन्टी बसेर वा क्रेडिट इन्सुरेन्स गराएर उक्त कम्पनीमार्फत लगानी ल्यायो भने पुँजी अभाव समस्या हल हुन्छ,' सानिमा मध्य तमोरका सिइओ जुगल भुर्तेल भन्छन्, 'त्यसले विद्युत विकासमा लागेको निजी क्षेत्रलाई पनि राहत हुनेछ।'
नेपालको स्वतन्त्र क्रेडिट रेटिङ छैन। त्यसैले विदेशीहरू नेपाली कम्पनी वा बैंकलाई ऋण दिन हच्किन्छन्। हामीले क्रेडिट रेटिङका लागि पनि पहल गर्नुपर्यो। आवश्यक सुधार गर्नुपर्यो। यसका लागि समय लाग्नेछ। त्यो बेलासम्म एचआइडिसिएल जस्तो सरकारी स्वामित्व भएको कम्पनीलाई सरकारी ग्यारेन्टी उपलब्ध गराएर भए पनि पुँजी भित्र्याउनेबारे सोच्नु पर्यो।
सुधारको अर्को क्षेत्र हो, नीतिहरूको निरन्तरता।
ठूलो पुँजी लाग्ने जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न नीतिहरूमा निरन्तरताको ठूलो भूमिका हुन्छ। जुन देशमा सरकारैपिच्छे नीति बदलिन्छन्, तिनले लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सक्दैनन्।
हाम्रोमा पनि नीतिहरूको निरन्तरतामा समस्या छ।
उदाहरण, पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले निजी विद्युत उत्पादकहरूलाई प्रतिमेगावाट उत्पादनमा ५० लाख रूपैयाँ भ्याट फिर्ता दिने नीति ल्याएका थिए।
सुरूसुरूमा उत्पादकहरूले सबै भ्याट फिर्ता पाए। पछि विस्तारै पैसा पुगेन भनेर दामाशाहीले बाँडेर फिर्ता दिन थाले। उत्पादकहरूले पूरा भ्याट फिर्ता पाउन छाडे।
यति महत्वपूर्ण क्षेत्रमा गरेको नीतिगत निर्णयमा पनि राज्य अड्न सकेन भने त्यसले लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश दिन्छ।
नीतिहरू ल्याउँदा वा परिवर्तन गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श लोकतान्त्रातिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत शर्त हो। नेपाल सरकार सो कुरामा बारम्बार चुक्ने गरेको छ।
सरकारले विकास परियोजनाहरूमा ५ प्रतिशतभन्दा धेरै विदेशी कामदार राख्न नपाउने नियम ल्याएको छ।
खुद्रा-मसिनाबाट सुरू गरेर आज ५० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना नेपाली आफैंले निर्माण गर्नसक्ने भएका छन्। त्यसका लागि प्राविधिक जनशक्ति र निर्माण व्यवसायीहरू पनि सक्षम भइसकेका छन्।
'तर सय मेगावाट वा त्योभन्दा माथिका आयोजना अहिले पनि नेपालीले बनाउन सक्दैनन्,' भुर्तेल भन्छन्, 'ठूला आयोजनामा काम गर्न विदेशी ठेकेदार ल्याउनै पर्छ। ५ प्रतिशत सीमाले समस्या ल्याउँछ।'
यसरी सानादेखि ठूलासम्म सुधार गर्नुपर्ने धेरै ठाँउ छन्। गर्न सकिने धेरै छ। लगानी ल्याउने सम्भावना पनि धेरै छ। बिजुलीका लागि आन्तरिक बजार तयार छ। बाह्य बजार अनुकूल छ।
तर फेरि पनि प्रश्न उही छ- के हामी साँच्चै बिजुली विकास गर्न चाहन्छौं? के हामी साँच्चै निरन्तर यसका लागि प्रयत्न गर्न तयार छौं?
अमेरिकी उद्यमी जिम रोहनले भने जस्तो हामी साँच्चै बिजुली विकास गर्न चाहन्छौ भने बाटो भेट्नेछौं, समाधान भेट्नेछौं।
होइन भने बहाना भेट्नेछौं।
आजको दस वर्षपछि पनि किन जलविद्युत विकास गर्न सकिएन भनेर बहाना भट्ट्याइरहेका हुनेछौं।
हामी के चाहन्छौं- समाधान वा बहाना?
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २९, २०७६, ०४:३६:००